Dagaal Culus Oo Ka Dhacay Deegaanka Buurane. – Bogga Calamada.com
Dagaal Culus Oo Ka Dhacay Deegaanka Buurane.
September 9, 2017 7:36 am Views: 293
Ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin waxey dagaal culus ku qaadeen deegaanka Buurane ee duleedka degmada Mahadaay ee gobalka Shabeelada dhexe oo saldhigyo iyo difaacyo ay ka sameysteen ciidamada Kufaarta Burundi.
Dagaalkan oo dhacay habeenkii xalay waxa uu socday ku dhawaad Hal Saac Iyo Bar waxaana la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan,iyadoona dhawaaqa rasaasta dagaalka si aad ah looga maqlayay degmooyin iyo deegaano ka kala tirsan gobalada Shabeelada dhexe iyo Hiiraan.
Dadka deegaanka ayaa xaqiijiyay in dagaalka uu ahaa midkii ugu cuslaay oo ka dhaca deegaanka tan iyo markii dhowr sano ka hor ciidamada Kufaarta Afrikaanta gaar ahaan kuwa Burundi difaacyada ay ka samesyteen deegaanka.
Sidoo kale dadka deegaanka waxey intaasi ku dareen in ciidamda Shabaabul Mujaahidiin Garneelada garbaha laga rido ay la heleen difaac uu ciidamada Burundi u dhex yaalay qori weyn oo duqeymaha u adeegsanayeen qarax xoogana la maqlay kadibna la arkay holac ka baxayo difaaca taasi oo muunineysa in askarigii ku sugnaay difaaca iyo qorigii uu ridayay ay isla burbureen.
Wararka laga helayo deegaanka Buurane waxey sheegayaan in sidoo kale tiro ka tirsan ciidamada Burundi baqti iyo dhaawac ay ku noqdeen dagaalka xalay ka dhacay deegaanka Buurane oo ahaa dagaal ay ka qeyb qaateen gaadiidka dagaalka sida Tiknikada ciidamada Mujaahidiinta.
Dagaalkaan ayaa kusoo aadaya xilli galinkii dambe ee shalay qarax ka dhacay duleedka Mahadaay lagu burburiyay gaari Taw ah laguna dilay Kow iyo Toban askari oo Burundeys ah.
Baas mariya garacyada
Biil inay ku qaataa
Hantideena boob leed
Baaniyaal u yimid iyo
Bahaladiyo yey daan
Ruux baxana yuu jiri
Allaahu akbar mujaahidiinta allaha barakeeyo howl adag ayey ku jiraan